बर्डफ्लु फैलिएको अवस्थामा अन्डा वा मासु खाने कि नखाने?
केही दिनअघि केही व्यक्तिले 'मैले अन्डा खाएको र त्यसपछि घाँटी खसखस गर्ने, रुघा लागे जस्तो भयो' भन्दै बर्डफ्लु परीक्षणका लागि परामर्श लिन अस्पताल आएका थिए।
के साँच्चै कुखुरा वा हाँसको मासु वा अन्डा खाँदा बर्डफ्लु सर्छ? यसको उत्तर हो, सर्दैन। किनभने बर्डफ्लुको भाइरस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पुग्ने बित्तिकै मर्छन्। अन्डा र मासु नेपालीले विशेष गरेर राम्ररी पकाएर खाने भएकाले त्यो सय डिग्री सेल्सियस तापक्रममा धेरै समय पकाएको हुन्छ। तसर्थ मासु वा अन्डा खाँदा बर्डफ्लु सर्ने प्रश्नै आउँदैन। आजको मितिसम्म विश्वमा कतै पनि मासु वा अन्डा खाएर बर्डफ्लु लागेर मानिसको मृत्यु भएको प्रमाणित भएको छैन। यस्तै, यो रोग मानिसबाट मानिसमा केही अपवाद बाहेक सहजै सर्ने गरेको पनि छैन। तसर्थ राम्ररी पकाएको मासु वा अन्डा खाँदा बर्डफ्लु सर्दैन।